Toy ireo efa hita tamin’ny toeran-kafa moa dia mbola tsy voahaja hatrany ny elanelana iray metatra teo amin’ireo mpilahatra izay tena marobe. Fokontany maromaro ao amin’ny boriborintany faha 3 no nalamina haka ny anjarany tao amin’ity CEG ity. Isan’izany, ohatra, ny avy ao Besarety, Mahatazana, Ambohitrakely ary Avaradoha, mazava ho azy. Be ny tsy fahatomombanana tsikaritra teo amin’ny fikarakarana ary isan’ny nampametra-panontaniana ireo nilahatra ny anton’ireo fanadihadiana marobe. Anontaniana hatramin’ny trano onenana na vita biriky na hazo. Hatramin’ny isan’ny fanaka. Saika ny antsipiriam-piainana rehetra, hoy ireo olona, sorena. Nalaina sary tsirairay avy ny olona. Ekena fa fotoana natao ho araraotina tokoa izao hanavaozana ny fanisana ny isan’ny mponina saingy fotoana ve tsy maintsy hampilaharana elabe ireo lazaina fa sahirana sy marefo na mbola hampitangoronana azy etsy sy eroa? Tsy tokony izay hampihena ny fotoana hivoahan’ny olompirenena ny lavan-tranony ve izao no himasoana sa atao resaka fotsiny izy ity?